Isifuba, iingalo kunye ne-Abs HIIT yokuSebenza ekhaya
Ngaba lo Novemba ubenzima kunesiqhelo? Kudala ndifunda uninzi lwezithuba mva nje malunga nabantu abaphulukana nenkuthazo yabo yokomelela komzimba, kwaye ndiyifumana ngokupheleleyo. Xa ubhubhane waqala okokuqala kwakusentwasahlobo kwaye ukuthatha ijog ngaphandle yayiyimizuzu engama-30 yokubaleka ekuhlaleni ...
Ukuxhathisa iBand ekhaya Workout
Ngexesha lomkhuhlane kunye ne-covid-19 spiking okwangoku, ii-gyms ezininzi ziyavala okwethutyana kwakhona. Olu qeqesho lunokwenziwa ekhaya kwaye lufuna kuphela ibhendi yokuchasana evulekileyo. Ibhendi iza ngobubanzi obahlukeneyo. Ubungqindilili bubanzi, ukuxhathisa ngakumbi kunika kwaye kunzima ...
Umsebenzi wasekhaya wasebusika
Nantsi imithambo ekhawulezayo yomzimba onokuyenza ekhaya engadingi nto ngaphandle kwentambo yokutsiba. Olu qeqesho lunemithambo emininzi yokutsiba ukuze intliziyo yakho inyuse ngexesha elifutshane. Izibonelelo zokutsiba ziphindaphindwe: yonyusa amandla akho eoksijini, imp ...